4 yevana uye firimu edhisheni nhau dzaDecember | Zvazvino Zvinyorwa
4 yevana uye firimu edhisheni nhau dzaDecember
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Fantasy, Mabhuku, Vechidiki Mabhuku, dzakawanda
Isu tava mukati december. Rimwe gore riri kusvika kumagumo (uye dai paine zvimwe zvakawanda). Mabhuku mazhinji akaburitswa, akanaka, akaipa uye akajairwa, senguva dzose, asi pane mashoma achangobuda kana kuburitswa mumwedzi uno wekupedzisira wegore. Nhasi Ini ndinounza 4 kune vadiki vaverengi uye akanyanya cinephiles. Ivo zvechokwadi vanogona kuvafarira. Kuva kuvhara.
1 Nur naOlentzero - Toti Martínez de Lezea
2 Chipo chakanakisa cheKisimusi - Noa Herrera Martínez
3 Nyika yeApes. The 50th Anniversary Book - Vanyori vakasiyana
4 Sezvaunoshuva: Nhau Dzisingafungidzike kubva Mukugadzirwa kweMuchikadzi Mwenga - Cary Elwes
Nur naOlentzero - Toti Martínez de Lezea
Tinoziva Toti Martínez de Lezea (Vitoria-Gasteiz, 1949) yekuve a munyori mukuru wenhoroondo yenhoroondo, asi zvakare ine izvi akateedzana emabhuku evana ane protagonist ndiNur. Enda mumwe gumi nemaviri yemazita uye ikozvino iwe une yako nyowani nyowani yaunogona kunakidzwa pamazuva ari kuuya aya Inoratidzwa naIván Landa.
Uye chii nezve? Zvakanaka Nur akanyora tsamba kuna Olentzero kwaanobvunza scooter yesirivha, asi kuchine zvakawanda zvakasara uye zuva rakareba. Saka pavanomirira, Aitite naNur vakagadzira muti weKisimusi. Ipapo Nur anoenda kunosangana nehama dzake Lucia naSara neshamwari dzavo uye mumwe nemumwe akakumbira Olentzero chipo. Kana Nur achiuya achiwedzera anoda kukubvunza kuti unogara kupi uye kana uchikwanisa kuenda unomushanyira.
Yakanakisa yeKisimusi iripo - Noa Herrera Martínez
Uye kana isu tiine nyaya dzevana, isu tingatadza sei kuunza ichi chidiki Munyori-wemakore gumi munyori uye illustrator kubva Seville Chii chinonzi Noa Herrera Martínez? Mupepeti Babidi-bu, nyanzvi mumabhuku evana nevechidiki, zvinotiunzira izvi nyaya yemusikana aida chinhu chimwe kupfuura chero chinhu chiri munyika. Saka, kunyangwe dzimwe nguva zvakaoma kuti zvishuwo zvedu zvizadzikiswe, hatifanire kurasa tariro. Zvese zvinogona kuchinja, sekumuchinja kwaakaita, kunyangwe nerubatsiro rudiki kubva kune mumwe munhu akakosha.
Noa herrera kaviri akahwina makwikwi ezvinyorwa muCadena Ser uye sezvo kwake kumwe kuda kukuru kuri dhiza, ikozvino inovhura nenyaya iyi. Muenzaniso wevazhinji vaverengi vadiki saiye.
Nyika yeApes. Ye50th Anniversary Bhuku - Vanyori vakasiyana
Iri bhuku rave kubuda iro rinopemberera iyo Makore makumi mashanu eiyi sci-fi firimu yechinyakare. Uye vanyori vane mukurumbira ndeavo svika uye taura nezve akasiyana mafirimu, iyo inonyatso kunakidza iyo yakanyanya cinephiles.
Ivo vanonyanya kubata ne: kutora mafirimu, protagonists, aesthetics, zvinokanganisa, kushoropodzwa kwezvematongerwo enyika, zvakateerana uye remakes izvo zvakagadzira yekupedzisira trilogy ... Uye ese achiperekedzwa ne yakajeka graphic kuratidza ine mifananidzo uye maposta yemuvhi.
Vanyori vari Ramon Alfonso, mutsoropodzi wefirimu uye munyori wenhoroondo, nyanzvi yesainzi yekunyepedzera; Jaime Iglesias, mumwe mutsoropodzi ane mukurumbira wemhando iyi; Y Adrian Sanchez, mumwe chiremera panhau yacho.
Sezvaunoshuva: Nyaya Dzisingafungidzike kubva kuKutora kweiyo The Princess Mwenga - Cary Elwes
Ndiani asina kuona Mwanasikana wamambo akapfimbana? Ndiani asina kumbotaura izvozvo nezve «Mhoroi, zita rangu ndinonzi Iñigo Montoya. Makauraya baba vangu… Gadzirira kufa! »? Zvakanaka, bhuku iri ratobuda nekubata kwendangariro kwakasainwa ne protagonist, mutambi wechiChirungu Cary Elwes, uyo akapa hupenyu kuna Westley. Mariri anotiudza zvese pane kuchinjika muna 1987 kune iyo huru skrini yeiyi ikozvino yechinyakare nyaya yakavakirwa pa William Goldman inoverengeka.
Mwanasikana wamambo akapfimbana inoramba ichishamisa nekuda kwekusanganiswa kwayo kwakakwana kwekufungidzira, kuseka uye kungwara. Makondo anounganidza anecdotes inotarisa dzimwe dzenhengo dzayo, senge Robin Wright, Mandy Patinkin (Íñigo Montoya), André the Giant, Billy Crystal kana Wallace Shawn.
Con Chirevo naRob Reiner, director weiyo firimu, iri bhuku rinonakidzwawo nevose vakaita izvi nefirimu rekare iri. Iyo edition inosanganisira poster yemuvhi.
Pakupedzisira, ngatirangarirei izvozvo Cary Elwes adzoka muchiedza gore rino nekuda kwebasa rake mu imwe nhepfenyuro yakabudirira kwazvo uye zvakare fungidziro / sainzi fungidziro, iyo inokudza iwo ma80s mukubata kwayo: Stranger zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » 4 yevana uye firimu edhisheni nhau dzaDecember